२०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार ०३:३०:००
कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सिध्याउन मेराविरुद्ध आरोपपत्र ल्याइयो : प्रधानमन्त्री
‘त्यो झुटा आरोपको पुलिन्दा किन ? म एउटा व्यक्ति हुँ, तर यो मसँग सम्बन्धित छैन, हाम्रो आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने, पार्टी समाप्त पार्ने कुरासँग सम्बन्धित छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । आफूले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा लिएर देशबाट गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन, भ्रष्टाचार हटाउँदै राष्ट्रको विकास गर्ने संकल्प लिएको वेला यस्तो आरोप लगाइएको उनको भनाइ थियो । ‘तर, सानातिना मतभेदमा अल्झिनु सही होइन,’ उनले भने ।
‘प्रधानमन्त्री विधि–पद्धतिबाट होइन, गलहत्याएर हटाउने ! अविश्वासको प्रस्ताब राखेर हटाउन पाउनुहुन्छ नि उहाँहरूले । संसदीय प्रक्रिया छ, संविधान छ, कानुन छ । प्रक्रियाबाट आउनुहोस्, हामी मान्छौँ । त्यसले केही बिग्रिँदैन । हामी डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेपछि दुईतिहाइ मतका साथ फर्केर फेरि आउँछौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘आफू बलियो छु भन्ने लाग्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीसँग कुस्ती खेल्ने ? संसदीय अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने त्यो अभ्यासभित्र आउनुप¥यो ।
सर्वाेच्चले फैसलाले देश अन्योलमा फसेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । ‘आवधिक निर्वाचनको कुरा धारा ७६ को उपधारा ७, धारा ८५ लगायतमा छ, प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार पनि हुन्छ । यी अभ्यासअनुसार चुनावमा गएको भए देश अगाडि बढ्थ्यो । अब फेरि देश अन्योलमा फस्यो,’ उनले भने ।
सर्वाेच्चले निर्णय सुनाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न २३ फागुनमा संसद् अधिवेशन डाकेको र त्यसैले देशमा स्थिरता ल्याउने आस रहेको उनले बताए । जनताको नामै सुन्न डराउने शक्तिहरूले संसद्मा खेल्ने भूमिका हेर्न आफू प्रतीक्षारत रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले देखाएको डर–धम्कीबाट विचलित नभई पार्टी र देशप्रति बफादार भएर निर्धक्कसाथ अघि बढ्न उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
‘उहाँहरूको बहुमत भनिएको केन्द्रीय कमिटी मैले बनाएको हो । त्यो अहिलेसम्म चलाएको छैन । जरुरी परेका वेला चलाउन सक्छु,’ उनले थपे, ‘कार्की बेैंक्वेटमा खान बोलाएका वेला आफैँ दलको नेता, अध्यक्ष चुनेर लड्डु खाए । उहाँहरूको बहुमत कहाँ पुष्टि भयो ? त्यो बहुमत होइन । भोज खान आएका मान्छे गनेर बहुमत हुन्छ ? अध्यक्ष, महासचिव, दलको नेताले बोलाएको बैठकमा आउनुप¥यो नि ।’
संवैधानिक दबाब : संसद् विघटन गर्ने ५ पुसको आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली एकैपटक संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दबाबमा परेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भन्दै संसद् विघटन गरेका थिए । ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै सर्वाेच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसले प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक दबाबमा परेका थिए ।
राजनीतिक दबाब : सातौँ अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा १२ दिनअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको छ । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २३ फागुनमा संसद्को सातौँ अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । संसद् बैठकमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताब आउन सक्ने भयले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दबाबमा छन् । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् भने यो समूहले ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस र जसपासहित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहको समीकरण बन्दा आफ्नो पद असुरक्षित हुने भयका कारण ओलीले लगातार राजनीतिक दबाब महसुस गरेका छन् । विभाजित नेकपामा पनि अल्पमत पक्षको नेतृत्व गरेकाले निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो अनुकूल निर्णय नदिने भय प्रधानमन्त्रीमा छ ।
नैतिक दबाब : संसद् विघटन गर्ने कदम बदर भएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरेको भनेर उनको नैतिकतामाथि राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनीवृत्तबाट व्यापक प्रश्न उठेका छन् । आफूले चालेको कदमको नैतिक जिम्मेवारी लिँदा राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री ओली यस्तो जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिँदै आएका छन् । संसद् विघटनको कदम उल्टिएपछि पनि राजीनामा नदिएपछि ओली नैतिक दबाबमा छन् । आफैँले विघटन गरेको संसद्मा कसरी जाने ? ओलीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ । तर, उनले राजीनामा दिनुको सट्टा अविश्वासको प्रस्ताब फेस गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा सुनेर मलाई आश्चर्य लाग्योे । अहिले राजनीतिक अन्योल छ, त्यसको सिर्जना उहाँले नै गर्नुभएको हो । त्यसमाथि अहिले थप हल्ला फैलाइरहनुभएको छ । देशको कार्यकारी प्रमुखसँग नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र उहाँका सहयोगीहरू सधैँ सँगै छन् । भिभिआइपी र भिआइपीको सुरक्षामा जहिले पनि ‘थ्रेट’ हुन्छ । त्यो नौलो विषय होइन । तर, उहाँले म ‘थ्रेट’मा छु, जहिले पनि आक्रमण हुनसक्छ भनेको त ममात्र होइन तिमीहरू पनि सुरक्षित छैनौ भनेर जनतालाई भन्न खोजेको हो । प्रधानमन्त्रीले नै असुरक्षित छु भन्ने दिन आएपछि जनता कसरी सुरक्षित होलान् ? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले यही सन्देश गएको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि ममाथि ‘थ्रेट’ छ भन्नुभएको छ । त्यति धेरै सुरक्षा हुँदाहुँदै पनि उहाँले आफूलाई सुरक्षा ‘थ्रेट’ छ भन्नु लज्जास्पद हो । प्रधानमन्त्रीलाई कोबाट ‘थ्रेट’ छ त ? कि त उहाँलाई आफ्नै पार्टीका विपक्षी समूहबाट ‘थ्रेट’ हो । अर्काे भनेको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतलाई ‘इन्डिकेट’ गरेको पनि हुन सक्छ । यो दुईवटाबाहेक अरू कोही पनि छैन । लोकप्रियता गुम्दै गएपछि देशका लागि केही गर्न खोज्दाखोज्दै मेरो हत्या गर्न खोजिएको छ भनेर सहानुभूति लिन खोजेको जस्तो लाग्यो । तर, यो राम्रो होइन । पार्टीभित्रको समीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो अवस्था आएको हो । उहाँले संसद् विघटन गरेपछि सम्पूर्ण सुरक्षा वातावरण बिग्रिएको छ । उहाँले सुरक्षा शक्तिलाई दोष दिने कुनै ठाउँ छैन । अरू कुरा बिक्री नभएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि असुरक्षाको कुरा बोल्नुभएको हो ।
राजनीतिक रूपमा हारपछि तरंग ल्याउन बोल्नुभएको होला : भीमसेनदास प्रधान, पूर्वरक्षामन्त्री
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सुरक्षा निकायको मनोबल डाउन हुन्छ : रमेश खरेल, पूर्वडिआइजी
अर्काे कुरा, प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्दै हिँड्ने पनि होइन । यस्ता कुराले सुरक्षा निकायमा ठूलो असर पर्छ । उनीहरूको पूरै ‘मोरल डाउन’ हुन्छ । सुरक्षाकर्मी त निकम्मा रहेछन् भन्ने सन्देश जान्छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा तीन करोड नेपालीले त असुरक्षित महसुस गर्ने नै भए, विदेशीलाई समेत त्यसको असर पर्छ । देशकै प्रधानमन्त्रीले नै सुरक्षित छैन भन्छन् भने त्यो देश त असुरक्षित रहेछ, त्यस्तो देशमा किन जाने भन्ने हुन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुहँुदैन ।